Fahavoazana tsy fahombiazana… | NewsMada
Fahavoazana tsy fahombiazana…
Ivon’ny fahombiazana teo amin’ny ezaka izay natomboka tao anatin’ny efa-taona, hono, iny taona 2017 nivalona iny. Marina ve izany? Arakarakara ny toerana misy ny tena ny fahitana ny zava-misy. Izay no mety tsy mampifankahazo resaka: ny fahombiazana amin’ny sasany, fahavoazana ho an’ny hafa.
Ny marina rehetra tsy filaza avokoa, raha ny fahavoazana no tanisaina? Na tsy izay lazaina rehetra dia marina, raha ny hoe fahombiazana no ilazana tena. Ny hoe fahombiazan’ny mpitondra mpanamarin-tena sy manao izay hahafa-po ny tenany amin’izay lazainy, mety ho fahavoazany ho an’ny vahoaka.
Hafa ny tena zava-misy sy izay niainan’ny vahoaka ifotony tamin’iny taona iny. Ivon’ny fahavoazana nandritra izay efa-taona izay? Amin’ny maso tsy miangatra sy tsy voatoto-tany na tsy minia mikimpy, vao mainka nihalalina no ho ny teo aloha aza ny fahasahiranam-bahoaka,ny fahapotehan’ny firenena…
Nanjaka ny tsy fandriampahalemana sy ny fitsaram-bahoaka. Tsy atokisana intsony ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana? Na ny fitondrana ankapobeny… Anisan’ny nahatafintohina ny sendikàn’ny mpitsara izay ka nitokonany, fa tsy hoe ny fitsabahan’ny fahefana mpanatanteraka ny asa fitsarana ihany.
Taona nidanganan’ny vidim-piainana koa iny, indrindra ny vidim-bary. Ivon’ny fahavoazana tamin’ny fambolena noho ny haintany, ohatra. Nanampy trotraka ny fisondrotry ny vidin-tsolika, saika isam-bolana. Nefa tsy voafehin’ny fitondram-panjakana ny raharaha, fa mizaka ny tsy eran’ny aina ny vahoaka.
Mbola taom-pahavoazana ho an’ny vahoaka koa iny, raha ny momba ny ady sy fandrobana tany etsy sy eroa saika manerana an’i Madagasikara. Inona no afitsoky ny mpitondra? Saika manenika ny sehatra sy ambaratonga rehetra ny fahalovana noho ny kolikoly, fahalalana olona, fandikan-dalàna…
Inona ny fahombiazana azon’ny vahoaka sitrahana amin’izany noho ny atao na tsy vitan’ny mpitondra amin’izay lazainy sy ampanantenainy? Ny marina rehetra tsy filaza avokoa, ary tsy izay lazaina rehefa dia marina.